Ayyaanni irreechaa Hora Finfinnee erga addaan citee waggaa 150 booda handhuura Oromiyaa Magaalaa Finfinnee iddoo Doloolloo Biddeenaa jedhamuutti kabajamaa jira. Sa’aa muraasaan booda sirni irreeffannaa iddoo kabaja Ayyaanichaatti Abbootii Gadaafi Haadholii sinqeen durfamee ni gaggeeffama. Sirna irreeffannaa kana irratti hirmaachuuf jilli Godinaalee Oromiyaa , naannolee biyyattii hunda ...
Aanuma Hidhabuu Abootee keessatti ganda Yaayyaa Dhaka Booraa iddoo Tulluu Gobbee jedhamuttis Sadaasa Guyyaa har’aa 01, 2020 tarkaanfii yeroo 2ffaaf fudhateen humna weerartuu kanarraa 60 ol battalatti yoo ajjeessu baayyee immoo ishee madoon adabee jira.yeroo ammaa kana Madoo Hosptalaatti guuraman keessaas ergamtuun nafxanyaa 5 hospitaala keessatti duu’uu maddeen Zoonii Kaaba Lixa Shaggar ...
Oduu guyya har'a kutaa Iowa waa'ee dhukuba Korona virus irraa. Kutaa Iowa kesatti dutii 2 galmoyte jirti, sababa dhukuba karona virus tin. Kun walii galati kutaa Iowa keessa namni 3 du'uun isaa himameera. Guyyaa jimaata manni haakima Iowa namni 56 dabalataan qabamuu himamee. Walii galatti namni dhukuba Kanaan qabame 235 gahaniiru.
ODUU AMMEE!! Breaking NEWS!!Dhukkubni Koroonaa Vaayrasii (Corona Virus) 4kiloo galeera! ... Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa guyyaa har'aa (Corona Virus) qabamuun beekameera! ... Har'a garuu warri aangoo fi qawwee harkaa qabu maqaa Amboon daldalaa jiru.
GMN- Gurraandhala 20, 2020/Guyyaa har’aa Gurrandhala 20,2020 Paartiin PP maqaa deeggarsa jedhuun ummata dirqisiisuun hiriirri inni Godinoota Harargee Lixaa fi… Oduu ijoo Wallagga
Oduu Ammee/Breaking News. ... Ilmaan Oromoo Barnoota Xumuranii Waggaa Dheeraaf Hojii Maleeyyii Tahan Guyyaa Har’aa Finfinnee... Gabaasa Qeerroo, Muddee 17 ...
Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa guyyaa har’aa (Corona Virus) qabamuun beekameera! Isa malees namoonni biiroo Barnoota Oromiyaa keessa hojjatan 45 ol (Corona Virus) shakkamanii qoratamaa jiraachuun beekkameera!!
Aanuma Hidhabuu Abootee keessatti ganda Yaayyaa Dhaka Booraa iddoo Tulluu Gobbee jedhamuttis Sadaasa Guyyaa har'aa 01, 2020 tarkaanfii yeroo 2ffaaf fudhateen humna weerartuu kanarraa 60 ol battalatti yoo ajjeessu baayyee immoo ishee madoon adabee jira.yeroo ammaa kana Madoo Hosptalaatti guuraman keessaas ergamtuun nafxanyaa 5 hospitaala keessatti duu'uu maddeen Zoonii Kaaba Lixa Shaggar ...
List of binds csgo16 hours ago · Finfinnee, Muddee 24, 2013 (FBC) - Dhaabbileen barnoota olaanoo hedduun guyyaa har’aa barattoota isaanii eebbisisaniiru.Yuunivarsiitiin Arbaa Miinci Koollejjin Yaalaa fi Saayinsii Fayyaa marsaa sadaffaaf leenjisaa kan ture Dooktoroota yaalaa 87 eebbi
Hulu adblock reddit 2020ODUU AMMEE!! Breaking NEWS!!Dhukkubni Koroonaa Vaayrasii (Corona Virus) 4kiloo galeera! ... Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa guyyaa har'aa (Corona Virus) qabamuun beekameera! ... Har'a garuu warri aangoo fi qawwee harkaa qabu maqaa Amboon daldalaa jiru.
Not eligible for heroic warfront questOduu. Dhiittaa Mirga Dhala Namaa ... Ibsa guyyaa har’aa (Onkoloolessa 8/2020) kennaniin Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa barbaachisummaa Mootummaa Ce’umsaa ...
What is true about the acceleration and velocity of the ball on its way downVOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su
Csf charge air coolerDec 29, 2007 · Har’a illee gootowwaan keenya guyyuu diina kuffisaa kufaa jiru. Kanaaf guyyaa WBO, Amajjii 1, kabaja, ulfinaa fi guyyaa injifannoo ta’uun yaadatnee oolla. Addi Bilisummaa Oromoo Amajjii 1, guyyaa WBO akka tahu kan murteesse sababa malee miti. Innis: Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee haga dhuma 1979tti ABO haala akkan rakkisaa keessa ture.
Dec 29, 2007 · Har’a illee gootowwaan keenya guyyuu diina kuffisaa kufaa jiru. Kanaaf guyyaa WBO, Amajjii 1, kabaja, ulfinaa fi guyyaa injifannoo ta’uun yaadatnee oolla. Addi Bilisummaa Oromoo Amajjii 1, guyyaa WBO akka tahu kan murteesse sababa malee miti. Innis: Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee haga dhuma 1979tti ABO haala akkan rakkisaa keessa ture. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa gaazexaa Addis Standard gabaasaniiru.
Kana malees hordoftootni amantaa Muslimaa uummannii Oromoo fi sabaafi sablammoonni mirgii amantaa isanii sarbamuu fi abba irrummaa Wayyaanee irratti dammaqanii jiran guyyaa har’aa kayyoon FDG garbummaa Qeerroon bilisummaa Oromoo godina keenyaa fi Oromiyaa keessatti gaggeessa jiru sirriidha, kayyoo kanas ni deeggarra, qeerroo cina dhaabbannee ...